Cote D'Ivoire neAfrican Tourism Board vanogovana Golden Vision
Location: musha » Kutumira » African Tourism Bhodhi » Cote D'Ivoire neAfrican Tourism Board vanogovana Golden Vision
Iyo African Tourism Board chinangwa ndechekudzosera Tourism kuAfrica yakabatana uye kunyora zvakare nhoroondo nyowani yeKondinendi yeAfrica kuburikidza neKushanya mushure me COVID-19. Vatungamiriri muIvory Coast vanobvumirana uye vanozvidaidza kuti Chiratidzo cheGoridhe.
Ivory Coast National Federation of Hospitality Indasitiri inobatana zviri pamutemo neAfrican Tourism Board, Chete nzira yeUnited Africa ndiyo inobatsira nyika.
Iyo African Tourism Board inosarudza mumiriri wayo kuCote D'Ivoire
Sachigaro weAfrican Tourism Board VaCuthbert Ncube vakurukura nzira yekumberi yekuvandudza indasitiri yekufambisa neyekushanya muAmai Africa yakapfuura COVID-19 uye vakawana maoko.
Mukati mehurongwa hwekudyidzana kwake kwakarongwa neveIvorian vevatariri vezvekushanya, Sachigaro weAfrican Tourism Board (ATB) VaCuthbert vasangana nhasi neNational Federation of Hospitality Industry yeCote d-Ivoire. Akagovana chiono cheATB nezve kumisikidzwa kwechikamu chekushanya muCote d'Ivoire.
Kuve iri nyika inotungamira muWest Africa Economic and Monetary Union, Cote d'Ivoire chete inogadzira 45% yeGDP yeiyo Union inonzi inoumbwa nenyika sere. Inoratidzira simba rehupfumi iro nyika rinomiririra mudunhu iri.
Musangano uyu wakapindwa nasachigaro weFNIH-CI, VaLOLO Diby Cleophas nevamwe vavanoshanda navo, naVaJoseph GRAH Mumiriri weATB muCote d'Ivoire.
Panguva yemusangano, Sachigaro weATB akatenda vateereri nekutambirwa kwakanaka kwaakagamuchira.
Akapa chiono cheATB chinova kudzokorodza kushanya uye kunyora zvakare nhoroondo nyowani yekondinendi yeAfrica mukutarisana nemamiriro ezvinhu epasi
Chinangwa ndechekumisazve Africa senzvimbo yepamusoro yevashanyi munzvimbo yepashure COVID19 denda.
"Africa inamai venyika", akadaro Ncube.
Naizvozvo chinangwa chekushanya kwake kuCote d'Ivoire kwaive kukurudzira vese vanoita zveIvory kuti vabatane maoko nekutsigira izvi chiratidzo chendarama .
Ncube akati: Africa inofanirwa kumira semumwe kuti ibudirire ichi chiratidzo chegoridhe. "Kunyanya zvakanyanya zvakakosha kutyora miganho nemafungire anoita kuti vanhu vemuAfrica vange vachivimba nemitemo yekumadokero uye vachiitadzisa kuzadzisa chinangwa chavo."
Sachigaro weFNIH-CI VaLOLO Diby Cleophas vakatenda zvikuru VaCuthbert Ncube nekuzvipira kwavakaita kuenda kuCote d'Ivoire zvisinei nenjodzi yeCOVID19.
Iye zvakare akatenda uyu waive mukana wevateereri vezvekushanya kuti vafungisisezve chikamu chekushanya nekuchidzokorora pasi pechisungo chitsva chesangano senge ATB iro rinoita kunge rinomiririra hutungamiriri hwakasimba
VaCuthbert vaimbove vakuru vakuru veUNWTO pachirongwa chayo chakabatana. Iwo masangano anochengetedza Dr Taleb Rifai anga ari maviri term Secretary-General weUNWTO.
Zvichakadaro, musangano uyu wakaratidza matambudziko akakosha akatarisana nekushanya mu Africa. Inosanganisira nendege dzemutengo wakakwira, kushomeka kwenendege dzakananga pakati penyika dzemu Africa, kushanya kwekushomeka kwemudzimba uye kwekurapa uko kunogona kupa hukuru kuHurumende. VaNcube naCleophas vakabvumiranawo nekushaikwa kwemitemo inowirirana uye inowirirana yekushanya inofanirwa kutonga kushanya muAfrica.
Pachinyorwa ichocho, Sachigaro weATB akatanga chikumbiro kuNational Federation of Hospitality Industry yeCote d-Ivoire kuti vapinde muhondo pamwe chete neATB yekukunda kukuru uye kupenya kweAfrica senyika yakajairwa amai.
Pakupedzisira akamirira vamwe vake, sachigaro VaLOLO Diby Cleophas vakazivisa zviri pamutemo kunyoreswa kwesangano ravo FNIH-CI senhengo yekuenda kuAfrican Tourism Board uye vakavimbisa kuramba vachitaurirana nemumiriri weATB VaJoseph GRAH kuti vawedzere kusimudzira hukama.
Ivory Coast yakabvumirana nehurongwa hwekushanda kusimudzira zvirinani kutenderera mukati nemaonero eATB uye nongedzo.
Mufananidzo wakatorwa pakupera kwemusangano kusimudzira kushanya kwaSachigaro weATB kuhofisi.
Africa Ambassador Covid-19 mutsa Taleb Rifai ushanyi
IATA ruzivo 2020 yendege kuchengetedzeka kuita